Fantatrao ve : Inona izany Vacances judiciaires
vendredi, 14 janvier 2022 10:23
Tahirin-tsary nindramina fampiaingoana
Misaotra hatrany ireo namana mpahay lalàna sy mpitsara manome fanazavana ho antsika.
Ny Vacances judiciaires dia fiatoana kely eo anivon'ny asam-pitsarana, izay efa fanaon'ny fitsarana hatramin'izay, manomboka ny 15 desambra ka hatramin'ny 15 janoary ny taona manaraka.
Izany akory tsy midika hoe mihidy tanteraka ny fitsarana, misokatra foana ny fitsarana, misy mpiandry raharaha na permanence hatrany ao, mandeha daholo ireo raharaha maika rehetra, toy ny assignation à bref délai sy ny d'heure en heure, juridiction de président (référés), misy ihany koa ny audiences de vacation na fitsarana isaky ny talata sy alakamisy raha ny eto Antananarivo, samy manana ny fandaminany kosa ireo fitsarana rehetra manerana ny nosy.
Ny asa sy fitsarana momba ny zaza ihany koa dia mandeha hatrany (acte de tutelle, sy izay maika rehetra dia mandeha foana).
Tamin'ny taon-dasa dia nifarana 17 desambra 2021 ny taom-pitsarana ary manomboka hiverina amin'ny laoniny amin'ny alatsinainy 17 janoary 2022 izao.
Izany hoe ireo fitsarana mandeha andavan'andro no somary mihantona kely mandritra ny Vacances judiciaires.
Marihina manokana amin'ny fankalazana manetriketrika amin'ny alalan'ny Rentrée solennelle io fiverenan'ny asam-pitsarana amin'ny laoniny io, na ny Rentrée judiciaire, fa tsy voatery hifanojo kosa anefa ny daty hidirana iverenan'ny asam-pitsarana rehetra sy ny fotoana ankalazana izany, tsy dia mifanalavitra kosa anefa izay daty izay.
Mandritra io Rentrée solennelle io no anaovana jery todika ihany koa, ilazana ny asa vita rehetra, rapport d'activités ny taona lasa, sy ny tomban'ezaka, ary filazana ireo tanjona ezahina ho tratrarina ny taona diavina.
Avoaka ampahibemaso amin'io fotoana io ny antontanisa ny asa vita, indrindra ho an'i Cour Suprême sy ireo ratsamangaika telo eo anivony, Cour de cassation, Conseil d'Etat ary ny Cour de compte.
Misy famelabelarana lohahevitra iray sy hafatra amin'iny fanamarihana manetriketrika na ny Rentrée solennelle iny.